(Emelitere ikpeazụ On: 18/02/2021)
A ọhụrụ ụgbọ okporo ígwè akara ka ulo oru, ekpuchi Azerbaijan, toro toro, na Georgia. The akara kpuchiri 820 Kilomita na accommodates freights na mgbakwunye njem ụgbọ oloko. Firstly, akara ga-akpa na-jikọọ Europe na China ebe gafere Russia. Gbọ oloko ahụ ga-arụ ọrụ site na Baku isi obodo Azerbaijan na isi obodo Georgia Tbilisi gaa obodo Kars na Turley. Ọzọkwa, Ọ ga-belata njem oge n'etiti Europe ụgbọ okporo ígwè akụrụngwa na Railgbọ okporo ígwè China. The oche nke Azerbaijan, toro toro, na Georgia, nakwa dị ka European Union na-anọchite anya, gara na oghere nke ọhụrụ ụgbọ okporo ígwè akara.
Nke abuo, ahịrị nke aha ya bụ 'Yurop Bridge', ga-jikọọ onodu aku na uba mba agabiga. Chinese ibu na-ebu site na China na Europe na a akara dị ka obere ka 12 ụbọchị. Ọzọkwa, na ụgbọ okporo ígwè ga-ibufe 5 nde tọn ibu kwa afọ na a ọnụ ọgụgụ na-atụ anya na-awụlikwa elu ka 17 nde oge. Ọzọkwa, a ga-eme ka mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri nke ngwá ọrụ na Azerbaijan ndị kasị ibu Caspian Sea region.
Okwu banyere ụgbọ okporo ígwè ọhụrụ
Ebe ọ bụ na ị ama ebe a, gaghị 3 nkeji chọta ndị kasị mma ụgbọ okporo ígwè tiketi maka gị ọzọ njem? Ebe ọ bụla ị na- na-eme atụmatụ ịga Europe anyị nwere ike inyere gị aka ịchọta tiketi. Ma ị na-achọ ịhụ Alps nke Switzerland na Italy ma ọ bụ ikekwe gaa na mba dị ka Belgium na Hungary anyị na-na na nwetara gị kpuchie. Akwụkwọ gị gbaa ụgbọ okporo ígwè ugbu a. Ịkwụ ụgwọ maka tiketi iji niile kasị mara ịkwụ ụgwọ ụzọ
#Asia #asiaeurope #Uchechukwu europeantravel Train Travel